Nalalka: lagu ogaado moodooyinka ugu fiican suuqa | Ragga Stylish
Xiirashada ugu fiican
Mid ka mid ah doorashada kumanaan ka mid ah xulashooyinka waa caqabad dhab ah. Waxaan ka hadlaynaa mandiillada korantada. Ma yahay xulashada moodooyinka ugu fiican suuqa Way ku caawin doontaa haddii aad go'aansatay inaad ka beddesho mandiillada gacanta oo loo wareejiyo manjooyin koronto ama aad u baahan tahay inaad ku beddesho makiinaddaadii hore mid cusub.
Baadi shavers ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyay kala duwan: Ka tagida mandiillada la awoodi karo iyo safarka illaa moodooyinka jiilka soo socda oo gaar ah, illaa mandiil heer sare ah.
1 Mashiinka safarka
2 Makiinado qiimo jaban
3 Xiirashada dhexda
4 Xiirayaasha-dhamaadka sare
Haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay shaar yar oo bilaa xadhig ah in aad qaadan karto meel kasta oo aan dhibaato lahayn, waxaa jira tusaalayaal si wanaagsan u guta shaqadooda isla markaana, marka lagu daro, ay yihiin kuwo la awoodi karo. Tixgeli xarrago Braun M-90 MobileShave. Way yar tahay, waxay ku socotaa baytariyada waana lagu dhaqi karaa biyaha socda. Xiirashada safarka kale ee sifiican loo qiimeeyay, gaar ahaan markay soo dhowdahay, waa Philips PQ203 / 17. Waa xiiraha wareega oo leh hawlgal batari iyo garbaha is-miiray.
Maaddaama ay awood yar leeyihiin, ku bixiyaan natiijooyinkooda ugu fiican gadhka dhawr maalmood ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaa si gaar ah muhiim u ah in haadka laga ilaaliyo qashin kasta oo carqaladeyn kara habka goynta. Isticmaal buraashka ku jira xiirashada ka dib si aad uga faa'iidaysato isticmaal kasta oo cusub oo aad u yareyso tirada istaroogyada.
Makiinado qiimo jaban
La Philips OneBlade QP2520 / 30 waa ikhtiyaar weyn miisaaniyadaha ugu adag. Ku saabsan yahay mashiin qiimeyntiisu aad u wanaagsan tahay inkasta oo uu qiime jaban yahay. Waxay isku dhafan tahay nidaamka 3-in-1 (googoynta, khadadka iyo xiirashada), waxaa loo isticmaali karaa qoyan oo qalalan waxayna leedahay nolol batari oo dheer.
Haddii aad raadineyso deg deg aan fiicnayn, maskaxda ku hay in kani u baahan yahay baasas ka badan moodooyinka kale. Had iyo jeerna si isku mid ah loo xiirto isla goobta waxay sababi kartaa cuncun, gaar ahaan meelaha xasaasiga ah, sida qoorta. Dhinaca togan waa taas Philips OneBlade QP2520 / 30 ayaa u roon maqaarka xasaasiga ah adoo cadaadis yar saaraya maqaarka.
La Philips S1510 / 04 waxay bixisaa rush ka fiican. Qaabka dhaqaale ee Braun waa xiirane laga fiirsado kooxdan qiimaha dhexdeeda ah haddii aadan ka fikirin in kaliya loo isticmaali karo qalalan.
Kuleylintu maahan wax gaar u ah manjooyinka aan qaaliga ahayn, laakiin dhammaantood, iyo sidoo kale wax kasta oo mootada wata. Laakiin dabiici ahaan waa kuwa u muuqda inay kululaadaan oo ay dhaqso u dhaqaaqaan. Xiira meelaha xasaasiga ah, sida qoorta, marka hore ilaa Ka fogow taabashada xiiraha meelaha xasaasiga ah sida marka ay kululaato.
Bartamaha-dhexe iyo sare-dhexe waxaan ku aragnaa malaha kuwa ugu wanaagsan ee qiimaha lacagta. ka Panasonic ES-LT2N-S803, oo isku dhafan dareeraha xiirista, ayaa ka mid ah. Sidoo kale xusid mudan waa Philips OneBlade Pro QP6520 / 30, midka ugu horumarsan farqiga badan ee ka yimaada Philips. Labaduba waxay leeyihiin naqshad soo jiidasho leh waana la gashan karaa qoyan.
Moodooyinkaas waxaa lagu kala soocay shaarbo dahaadhay. U isticmaal sidii iyagoo ah mandiil caadi ah. Taasi waa, waxqabad istaroogyo toosan intaad maqaarka ku adkeyneyso gacantaada bilaashka ah si kor loogu qaado timaha. Dhinacooda, xiirashada wareega waa inay la socdaan dhaqdhaqaaq wareeg ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa lagugula talinayaa inaad had iyo jeer isticmaasho mandiil xagal sax ah, adigoo u gudbinaya dhanka koritaanka timaha.
Haddii aad raadineyso a dhexdhexaad xiiraha wareega, tixgeli Taxanaha Philips 5000 S5110 / 06. Xiiristaani waxay u egtahay inay dhakhso badan tahay (in kasta oo halista cuncun sidoo kale ka sarreyso) waana lagu nadiifin karaa biyaha socda. Dhanka kale, looma isticmaali karo qoyan. Ikhtiyaar xiiso leh haddii maqaarkaagu aanu aad u xasaasi ahayn.
Oo waxaan u nimid jiilkii ugu dambeeyay. Ku Taxanaha Braun 9 9290cc es qaabka ugu hufan ee shirkadda Jarmalka ee Braun. Ku mashquulka soo-saarayaasha ayaa ah in la yareeyo tirada baasaska nooc kasta oo cusub, markanna Braun wuxuu sheeganayaa inuu ku guuleystay wax-ku-ool aan caadi ahayn oo ay ugu wacan tahay shantiisa cunsur ee goynta, laba jibbaarayaal khaas ah, madax dabacsan iyo 10.000 oo mikrovibrations. Iyo dhammaantood iyada oo aan la iloobin fayoobka maqaarka, taas oo ah waxa ugu muhiimsan. Intaa waxaa dheer, waa mashiin dareen leh (wuxuu si toos ah awooddiisa ugu hagaajiyaa iyadoo ku saleysan cufnaanta gadhka) wuxuuna la yimaadaa saldhig nadiifin wax ku ool ah.
Marka ay timaado xiirashada-dhamaadka sare, waa inaan sidoo kale iftiiminaa Panasonic ES-LV95, xiiraha oo leh teknolojiyaddii ugu dambeysay, oo ay ku jiraan shaashad casri ah LCD. Sidoo kale Taxanaha Braun 7 7840s, waxyar ka gaabiya taxaddarkeedii 9aad ee ka weynaa, laakiin ficil ahaan isku dherer wax kasta oo kale.
Makiinadahaas waxaa loo isticmaali karaa qoyan (xumbo, jel ama wejiga oo gebi ahaanba qoyan). Hawl aad u muhiim ah haddii aad leedahay maqaar xasaasi ah. Si tan loo sameeyo, si fudud u mari jel ama xumbo oo sug 3-4 daqiiqo timaha iyo maqaarku inay jilcaan ka hor intaadan bilaabin. In kasta oo xiirashada qallalan ay dhakhso badan tahay oo dhaqso u muuqato, maskaxda ku hay inay sidoo kale ka sii dagaal badan tahay maqaarka wejiga iyo qoorta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Xiirashada ugu fiican
Timaha jaraha ugu fiican